Unemibuzo engaphenduleki unina kasjava "kwelokudlwengula" - Ilanga News
Home Izindaba Unemibuzo engaphenduleki unina kasjava “kwelokudlwengula”
Unemibuzo engaphenduleki unina kasjava “kwelokudlwengula”
UNINA kaSjava, uNkk Thandi Radebe uthi uzoyeseka kuze kube sekugcineni indodana yakhe odabeni esolwa ngalo lokuthi yadlwengula owayeyi-sinqandamathe sayo, uLady Zamar.
UFUNGA uyagomela uthi uzoyeseka indodana yakhe uJabulani “Sjava” Radebe, uNkk Thandi Radebe, uMaNkabinde, njengoba ngempelasonto kusabalale izindaba zokuthi ivulelwe icala lokudlwengula ngowayeyisinqandamathe sayo, uLady Zamar – ogama lakhe langempela nguYamikani Banda.
Ekhuluma ngokukhethekile ne-LANGA uMaNkabinde, uthe uyamazi umntanakhe, akasoze wenza okuphambene nomthetho kodwa akukho okutheni azokusho njengoba udaba selusingethwe ngabakwasidlodlo. Uthe okubuhlungu ngale mibiko esabalele, yisikhathi eputshuka ngaso kwabezindaba.
“Kungani ivela ngesikhathi lapho uSjava ebenza into enhle yokugcwalisa i-ICC (i-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre, eThekwini) izinsuku ezimbili ekubeni icala kade lavulwa?” kusho yena.
Uthi indaba yokudlwengula yinto ebucayi okungamele isetshenziswe ngabantu abafuna ukufeza izinhloso zabo, wathi uzoyeseka kuze kube sekugcineni indodana yakhe ngoba akakholwa ukuthi esolwa ngakho yakwenza ngempela.
Uncome indodana yakhe ngokuba wusizo emndenini. Uthe kubuhlungu ukuthi nangoLwezi (November) nyakenye ngesikhathi uSjava eqeda ukwenza umcimbi ePretoria, kwavela imibiko yokuthi wahlukumeza uLady Zamar.
“Indodana yami kayisakwazi ukuthokozela impumelelo yayo manje,” kubalisa uMaNkabinde.
Uthe uzoyikhulekela indodana yakhe ukuze idlule kulezi zivuvaba ebhekene nazo.
“USjava ungumuntu obahloni-phayo abaphansi, ngakho bazoma naye, nasebandleni esikhonza kulona bakhona asebemnikelele ukuthi adlule kulolu bishi afakwa kulona,” kusho yena.
Ukuvezile ukuthi useke wambuza uSjava ngalezi zinsolo kodwa wazichiliza ezihlekela, ekhombisa ukuthi yinto engekho. Uthe oku-buhlungu wukuthi le nkinga isiqala ukuphazamisa ukusebenza kwakhe nje-ngoba esehoxisiwe kwi-Cape Town International Jazz Festival. Ngakolunye uhlangothi, uSjava ukhiphe isitatimende ethi akazange amdlwengule uLady Zamar.
Uthi kuningi osekwenzekile ku-sukela wamemezela ukuthi uzofuna ukwelulekwa ngabameli ngesikhathi kuphume udaba lokuthi uhlukumeza uLady Zamar.
Okunye akwenzile wukudlulisela amasamanisi kubameli bakaLady Zamar ngokudicilela phansi isithunzi sakhe. Uphinde waveza nokuthi useke waxhumana namaphoyisa, wabhala nesitatimende ebeka uhlangothi lwakhe mayelana nokwenzeka ngosuku lwesigameko futhi walandelela nasemaphoyiseni ngemuva kokuba esesibhalile isitatimende.
Previous articleUsola amaNazaretha ngokumdicilela phansi
Next articleKulusebenzele uSuthu ukucasula iChiefs